Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Trindade -> Chineke
Tempo de Deus)
Sendo salvo do pecado
Vírus / Doenças
1 KỌRINT 8:6
2 KỌRINT 3:17
Nꞌihi na Onyenwe anyị bụ Mmụọ ahụ anyị na-ekwu ihe banyere ya. Ebe ọ bụla kwa Mmụọ Onyenwe anyị nọ, nꞌebe ahụ ka mmadụ pụrụ inwere onwe ya.
2 KỌRINT 13:14
Ka mara naesite nꞌebe Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nọ abịa, na mmekọ nke Mmụọ Nsọ naeweta, dịnyere unu nile. Amin.
Nꞌihi na nꞌime Kraịst ka e nwere ụdị izu oke Chineke nke pụrụ ịpụta ìhè nꞌahụ mmadụ.
Mụ na Nna bụ otu.”
Mmụọ ozi ahụ zara ya sị, “Mmụọ Nsọ Chineke ga-abịakwasị gị, ike Chineke ga-ekpuchikwa gị. Mgbe ahụ nwa ahụ ị ga-amụ ga-abụ onye dị nsọ. A ga-akpọkwa ya Ọkpara Chineke.
‘Lee, nwagbọghọ ahụ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, ọ ga-amụkwa nwa nwoke. A ga-akpọ aha ya Ịmanụelụ, nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke nọnyeere anyị.’ ”
Ya mere, gaanụ mee ka mba nile bụrụ ndị na-eso ụzọ m. Meenụ ha baptizim baa nꞌaha Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ.
 Mgbe Jisọs sitere na mmiri ahụ pụta, lee, eluigwe meghere, Jọn hụrụ Mmụọ Chineke ka o si nꞌelu fedata dị ka nduru bekwasị Jisọs nꞌisi. Nꞌotu oge ahụ kwa, olu sitere nꞌeluigwe kwuo okwu sị, “Onye a bụ Ọkpara m, nke m hụrụ nꞌanya. Ihe ya dị m ezi mma.”
 Nꞌihi na ihe dị mkpa na ndụ onye Kraịst abụghị ihe anyị riri, ma ọ bụ ihe anyị ṅụrụ. Kama ọ bụ ime ka ezi omume, na udo, na ọnụ na-esi nꞌaka Mmụọ Nsọ abịa dịrị na-aga nꞌihu. Nꞌihi na ọ bụrụ na i nye Kraịst ohere ka ọ bụrụ onye ga-ekpebi ụdị omume ị ga-eme, obi ga-atọ Chineke ụtọ, ndị mmadụ ga-ahụkwa ya nꞌime gị.
 Otu ụbọchị Jisọs sooro igwe mmadụ bịa ka Jọn mee ya baptizim. Mgbe Jọn mesịrị ndị mmadụ baptizim, o mekwara Jisọs baptizim. Ma mgbe Jisọs nọ na-ekpe ekpere, oge e mesịrị ya baptizim, eluigwe meghere. Mmụọ Nsọ sikwa nꞌelu rịdata dị ka nduru, bekwasị Jisọs nꞌisi. Nꞌotu oge ahụ olu sitere nꞌelu daa sị, “Ị bụ Ọkpara m, onye m hụrụ nꞌanya. Ihe nile banyere gị na-atọ m ụtọ.”
 Onye ọrịa ahụ zara sị, “Ahụ enweghị ike ịdị m mma, nꞌihi na mgbe ọ bụla mmiri a mere mkpatọ enweghị m onye ọ bụla ga-ekuba m nꞌime ya. Ọ bụrụ na m achọọ ịbanye, onye ọzọ ga-esi nꞌazụ m kwatuo m, buru m ụzọ banye.” Jisọs gwara ya okwu sị, “Nwoke, bilie, chilie ute gị laa!”
1 PITA 1:1-2
 Ọ bụ mụ onwe m Pita, onyeozi Jisọs Kraịst na-edegara ndị nile Chineke họpụtara akwụkwọ a, ndị ahụ nile si Jerusalem gbara ọsọ ndụ gaa biri nꞌobodo nile nke Pọntus, Galetia, Kapadosia, Esia na Bitinia. Ndị enyi m, nꞌoge gara aga, Chineke onye bụ Nna họpụtara unu dị ka nzube ya si dị. Ọ makwaara na unu ga-emesị bụrụ ụmụ ya. Mmụọ Nsọ ya emeekwala ka unu bụrụ ndị dị nsọ, ndị a sachara nꞌọbara Jisọs Kraịst, na ndị na-erubere ya isi. Ka amara na udo dịrị unu.
2 KỌRINT 1:21-22
 Ọ bụ Chineke nꞌonwe ya mere ka anyị na unu guzosie ike nꞌime Kraịst. O meela ka anyị bụrụ ndị e doro iche nye ya. Chineke akakwasịla anyị akara ya igosi na anyị bụ ndị nke ya. O nyekwala anyị Mmụọ Nsọ ya nꞌime obi anyị dị ka ihe akaebe na anyị ga-anata ihe nile o zubere inye anyị.
1 KỌRINT 12:4-6
 Ọ bụ ezie na onyinye Mmụọ Nsọ Chineke dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu Mmụọ Nsọ ahụ na-enye ha. Anyị na-esite nꞌụzọ dị iche iche na-efe Chineke, ma ọ bụ nanị otu Chineke ahụ ka anyị na-efe. E nwere ụzọ dị iche iche Chineke si arụ ọrụ nꞌime anyị, ma ọ bụkwa otu Chineke ahụ na-arụ ihe ndị a nile nꞌime mmadụ nile.
 Ọ bụ nanị otu anụ ahụ Kraịst dị, otu Mmụọ Nsọ dịkwa. Anyị nwekwara nanị otu olileanya nke Chineke debere nꞌihu anyị. Ọ bụ nanị otu Onyenwe anyị dị, otu okwukwe na otu baptizim. Ọ bụkwa nanị otu Chineke dị onye bụ Nna ihe nile na onye na-achị ihe nile, na onye na-arụ ọrụ ya nꞌime ihe nile, na-ebikwa nꞌime ihe nile.
 Kraịst bụ nnọọ oyiyi Chineke onye anyị na-apụghị ịhụ anya. Ọ nọ na-adị ndụ tupuu Chineke ekee ihe ọ bụla e kere eke. Nꞌezie, ọ bụ site nꞌaka Kraịst ka e ji kee ihe nile dị nꞌụwa na nke dị nꞌeluigwe, ndị anyị pụrụ ịhụ anya na ndị anyị na-apụghị ịhụ anya. Ike nile dị iche iche, ma ike nile nke mmụọ dị iche iche, ya na ndị isi ha nile, na alaeze ha, ma ndị na-achị achị nꞌetiti ha, ma ndị na-atụ ihe ga-eme eme. Kraịst kere ihe nile. O kere ha iji ha ịrụ ọrụ dị ka o si dị ya mma, na isite na ha wetara onwe ya otuto. Kraịst nọ anọ tupuu e kee ihe nile, ọ bụkwa ike aka ya ka o ji ejikọta ihe nile, mee ka ha dịrị ebe ha dị.
 Jisọs zara ya sị, “Ọtụtụ oge ndị a mụ na unu nọrọ ọ̀ bụ na ị matabeghị onye m bụ, Filip? Onye ọ bụla hụrụ m ahụla Nna ahụ. Gịnị mere i ji na-asị m, ‘Zi m Nna ahụ?’ Ọ bụ na i kweghị na m nọ nꞌime Nna m, na Nna m nọkwa nꞌime m? Okwu nile m na-ekwu esitekwaghị nꞌebe m nọ pụta. Ha bụ okwu nke Nna m. Nna m bi nꞌime m na-arụkwa ọrụ ya nꞌọnwe ya. Kwere ihe m gwara gị. Ebi m nꞌime Nna m, Nna m bikwa nꞌime m. Ọ bụrụ na i kwereghị okwu ọnụ m, kwere nꞌihi ọrụ ndị a nile m na-arụ.
 Ka omume unu nile dịrị ka nke Jisọs Kraịst. Onye, ọ bụ ezie na ọ bụ Chineke, ma ọ gụghị ike ya na ọdịdị ya dị ka Chineke dị ka ihe ọ ga-ejidesi aka ike. Kama, o wedara onwe ya ala bịa nꞌụwa dị ka ohu, na onye na-adịghị ike. O kwenyere ka a mụọ ya dị ka e si mụọ mmadụ nile bi nꞌụwa. Ebe ọ bịara nꞌụwa dị ka mmadụ, o wedakwara onwe ya ala, rube isi họrọ ịnwụ ọnwụ jọkarịsịrị njọ, ọnwụ ihere, nke ịbụ onye a kpọgidere nꞌelu obe.
 Mụ na Nna bụ otu.” Mgbe ahụ ndị Juu tụtụlitere nkume ọzọ ịtụ ya. Ma Jisọs jụrụ ha ajụjụ sị, “Arụrụ m ọrụ ebube dị iche iche site nꞌaka Nna m inyere ọtụtụ mmadụ aka. Ọ̀ bụ nꞌihi ọrụ ebube nke ole ka unu ji chọọ ịtụ m nkume?” Ndị Juu zara ya sị, “Anyị achọghị ịtụ gị nkume nꞌihi ọrụ ọma ị rụrụ. Kama anyị chọrọ ịtụ gị nkume nꞌihi na gị, bụ mmadụ efu, na-eme onwe gị dị ka Chineke.” Jisọs sịrị ha, “Ọ̀ bụ na edeghị ya nꞌakwụkwọ iwu unu na a kpọrọ ndị mmadụ chi? Ọ bụrụ na a kpọrọ ndị natara ozi Chineke chi, ma apụkwaghị iwezuga akwụkwọ nsọ, unu si aṅaa agwa m, mụ, onye Chineke doro nsọ zite nꞌụwa, na m adịghị asọpụrụ Chineke nꞌokwu m nꞌihi na m kwuru na abụ m Ọkpwara Chineke?